March 9, 2017 - Sawirrotv
Daily Archive for: 'March 9th, 2017'
Ciidamada Amisom oo Maanta Dad Xoolodhaqato ah ku Laayay Gobolka Shabeelaha Dhexe
March 09, 2017 – Ciidamada midowga afrika ee AMISOM ayaa maanta labo ruux ku dilay qaar kalena ka kaxaystay tuulada Qurac-Madoobe oo hoostagta degmada Mahadaay ee gobolka Sh/dhexe. Dadka degaanka ayaa sheegaya in dadka la dilay iyo kuwa nolosha lagu watay ay ahaayeen xoolo dhaqato ka tirsan degaanka. Falkan ayaa dhacay wax yar uun ka …
Qubanaha ee Isbuucan March 09, 2017 (VIDEO)
Xaalada Abaaraha ka jira dalka Soomaaliya oo ka sii daraya, iyo xoghayaha guud ee Qaramada Midoobay oo booqday xeryo ay ku jiraan dadka abaartu saameysay. Muxuu amarka cusub ee uu soo rogay madaxweyne Donald Trump kaga duwanyahay kii hore ee sababay, in Garoomada diyaaradaha ee dalka Maraykanka ay buux dhaafiyaan dad mudaaharaadayay.
Qaraxii Xildhibaan C/qaadir Faarax Bootaan (VIDEO)
Wararka ka imaanaya Magaalada Gaalkacyo, ayaa sheegay in loo maleynayo in qaraxani lagu soo xiray gaariga gaarka ah ee Xildhibaan C/qaadir Faarax Bootaan, waxaana uu qaraxu dhacay, xilli uu saarnaa gaarigiisa. Ma jirto cid sheegatay masuuliyadda qaraxani, hase yeeshee waxaa lala xiriirinayaa Ururka Al Shabaab, oo marar badan qaraxyo ka fuliyay magaaladasia Gaalkacyo.